NamasteNEPALI.com: नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ ? पढ्नुहोस् सरकारले ल्याएको २७ नयाँ नियम
नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ ? पढ्नुहोस् सरकारले ल्याएको २७ नयाँ नियम
छटमाथि पिलर राखी राख्न नपाइने, पर्खाल र सेफ्टीट्यांकीको पनि नक्सा पास
काठमाडौँ, ३२ साउन । सरकारले स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धि आधारभूत मार्गदर्शन २०७२ ल्याएको छ । सुरक्षित र भूकम्प प्रतिरोधात्मक आवास, व्यवस्थित बसोबासका लागि सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड ल्याएको हो ।
अब छटमाथि पिलर राखी राख्न नपाइने भएको छ । सार्वजनिक मार्गदर्शनमा सडकको चौडाइ, खाली राख्नुपर्ने जमिन, खुला क्षेत्र, निर्माण अनुमति, क्षेत्राधिकार लगायत २७ वटा मापदण्ड समाबेश छन् । मापदण्ड अनुसार अब नयाँ बन्ने हरेक घरको वरपर ३० देखि ४० प्रतिशत जमिन खुल्ला हुनुपर्ने छ । सार्वजनिक जग्गालाई बाटो देखाई नक्सा पास गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
त्यस्तै पर्खाल बनाउन पनि नक्सा पास गराउनु पर्नेछ । विभिन्न प्रयोजनमा लगाइने पर्खालको अधिकतम उचाइ ४ फिट तोकेको छ । चारफिट भन्दा अग्लो बार आवश्यक परे, ४ फिट पर्खालमाथि बढिमा ३ फिट जाली राख्न पर्नेछ । अबदेखि आवासका लागि नक्सापास भएको भवनलाई व्यवसायीक प्रयोजनमा भाडामा लगाउन पाइने छैन । यस्तै भवन निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन नभएका भवनलाई स्कुल, अस्पताल जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
त्यस्तै भिर पाखा जमिनमा घर बनाउन प्रतिवन्ध लगाएको छ । नयाँ मापदण्ड अनुसार ३० डिग्रीभन्दा भिरालो जमिन र भुगर्भ विभागले जोखिमयुमक्त भनी तोकेको क्षेत्रमा भवन बनाउन रोक लगाएको घर बनाउन पाइदैन ।
अर्को महत्वपूर्ण बुँदा भनेको स्थानीय निकायका कर्मचारीले आफ्नो स्थानीय निकाय भित्रका भवनको नक्सा पास गर्न पाउँदैनन् । हरेक नगरपालिकामा इञ्जिनियर काउन्सिलमा दर्ता भएका २ जना इञ्जिनियर हुनुपर्नेछ । महानगरपालिका र उप महानगरपालिकामा जियो टेक्निकल इन्जिनियर समेत हुनुपर्ने ब्यबस्था गरिएको छ ।
यसैगरि अब नयाँ भवन निर्माणाधिन स्थलमा अनिवार्य रुपमा भवन निर्माण इजाजत पत्र राख्नु पर्नेछ । एक हजार भन्दा बढि घरधुरी भएका गाविसहरुमा समेत यो मापदण्ड लागु हुनेछ । यस्तै शहरभित्र रहेका अहिलेका स–साना गल्लिको चौडाइ समेत कम्तिमा ४ मिटर तोकिएको छ । भवनको एकरुपता र शहरी सौन्दर्यताका लागि संहिताले अब हरेक क्षेत्रमा सरकारले तोकेको डिजाइन, तला र रंगमा मात्र घर बनाउन पाइनेछ । सरकारले हरेक क्षेत्रमा छुट्टा छुट्टै रंग, आकार र डिजाइन तोक्नेछ ।
Labels: MAIN, NEPAL, NEWS, USEFUL